बामदेवलाई छाया प्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि नेकपामा विवाद साम्य । के हो छाया प्रधानमन्त्री ? – www.agnijwala.com
बामदेवलाई छाया प्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि नेकपामा विवाद साम्य । के हो छाया प्रधानमन्त्री ?
राजनीतिमा सिद्धान्तका कुरा गरेपनी अन्तमा सहमति नै हुदोरहेछ भन्नेकुरो चरितार्थ गर्दै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीप्रति निकै आक्रामक देखिएका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम अन्तिम दिन मौन बसे । गत विहीबार साँझको बैठकमा आक्रामक देखिएका गौतम शुक्रवार विहानको बैठकसम्म आइपुग्दा रातारात किन शान्त भए ? उनी शान्त हुनुको रहस्य खुलेको छ ।अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको बुझिन्छ ।
पहलस्वरुप विहीबार साँझ बैठक सकिए लगतै बालुवाटारबाट प्रचण्डले एक घण्टा गौतमसँग कुरा पनि गरेका थिए । एक घण्टाको टेलिफोन संवादमा प्रचण्डले एउटा शक्तिशाली विभागको प्रमुख बन्न प्रस्ताव गरेपछि उनको आवेग रातारात शान्त भएको पार्टी स्रोतले बताएको छ ।
नेकपाले पार्टी र सरकारलाई ब्यवस्थित बनाउन ३९ विभागहरु निर्माण गर्ने भएको छ । ३९ विभाग मध्ये सवैभन्दा शक्तिशाली बिभाग बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि सवै मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी गर्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनका पक्षमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुलाई अध्ययन गरी पार्टी र सरकारलाई सुझाव दिनेछ । पार्टीभित्र छाया प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने विभागको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव विहीबार राति प्रचण्डले गरेका थिए । प्रचण्डको यही प्रस्तावपछि गौतम रातारात शान्त भएको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन । बाकी बिभागको जिम्मा कोको ले पाउने हुन त्यो भने बाहिर आएको छैन ।